हत्तपत्त हार खाँदैनन् यी ३ राशिका व्यक्ति, सफलता पाएरै छोड्छन् !! | सुदुरपश्चिम खबर
हत्तपत्त हार खाँदैनन् यी ३ राशिका व्यक्ति, सफलता पाएरै छोड्छन् !!
हाम्रो समाजमा हरेक मानिस आफूले गरिएको काममा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन् । तर हरेक मानिस आफूले सोचेको सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् । सफल ति मानिसहरु हुन्छन्, जोसँग निश्चित संकल्प र आत्मविश्वास हुन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रलाई जीवन बुझाउने एकमात्र शास्त्र भनिएतापनि कहिलेकाहिँ हरेक भविष्यवाणि पूरा हुन्छ भन्ने पनि छैन । किनकी कर्मविरहरुले प्रमाणित गरेका छन्, ‘कर्म गर फल अवश्य पाईन्छ’ भनेर । यद्यपी भगवान् नै छैनन् भन्नेहरुले समेत मानिसको जीवन, भविष्यबारे निकै चासो राख्छन् ।
ज्योतिष भन्छन्, पहिलो शुभ ग्रह हुन्छ शनि, यस ग्रहको कुण्डलीमा शुभ स्थितिमा भए भाग्यले सधै साथ दिने गर्दछ । दोस्रो र तेस्रो ग्रह हुने गर्दछ मंगल र बृहस्पति। यी दिनहरुमा शुभ स्थिति व्यक्तिलाई सधै सफलता प्राप्त हुने गर्दछ ।
१२ राशिहरुमध्ये ३ राशि यस्तो हुने गर्दछन् जो कुनैपनि अवस्थामा पनि हार मान्दैनन् । यिनीहरु जुनकुनै हालतमा पनि जित हासिल गर्छन् । यी तीन राशिहरु धन, सुख समृद्धि र आफ्नो जीवनमा प्रतिष्ठा बनाउनमा सधै सफल रहने गर्दछन् । यिनिहरु वचनको पनि पक्का हुन्छन् ।
मेष राशिः मेष राशि हुने व्यक्ति आफ्नो नेतृत्व क्षमताको कारण सधै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहने गर्दछ। यी मानिसहरु आफ्नो बुद्धि, कौशलता र आत्मविश्वासको बलमा हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन्।
साथै यी व्यक्तिहरु राम्रो नेता र चर्चित वैज्ञानिक पनि हुने गर्छन्। यीनिहरु हरहालतमा हार खाँदैनन्। मेष राशिका व्यक्ति सकभर आफू नेतृत्व लिन चाहन्छन् र, जित आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहन्छन् ।
धनु राशिः जो आफ्नो हरेक काममा सफलता पाउनको लागी ठूलै क्रान्तिकारी निर्णय लिने गर्दछन् । यस राशिको मानिसहरु ठूलो भन्द ठूलो निर्णय तुरुन्त नै लिने गर्दछन् । यीनिहरुसँग दरिलो आत्मविश्वास र दृढ ईच्छाशक्ति हुने गर्छन् । नयाँ पुस्ता बाट सभार